डोटीका महिलामा यौनरोग सङ्क्रमण बढी | Nepal Newz
Home > नेपाली समाचारहरु > स्वास्थ्य > डोटीका महिलामा यौनरोग सङ्क्रमण बढी
News December 21, 2016 स्वास्थ्य	0
डोटी– पुरुषभन्दा महिलामा यौनरोग सङ्क्रमणको खतरा बढेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, डोटीले हालसम्म एक हजार ३ सय ४४ महिलाको पाठेघरको मुखको परीक्षण गर्दा यस्तो भेटिएको हो । ती मध्ये ७८२ महिलामा यौनरोग सङ्क्रमण भेटिएको छ ।
परिवार नियोजन सङ्घ डोटीले सन् २०१४ देखि पाठेघरको मुखको क्यान्सरको परीक्षण गर्दै आएको छ । हालसम्मको सङ्घको तथ्याङ्क हेर्दा यौनरोग सङ्क्रमण दर बर्सेनि बढ्दै गएको देखिएको छ । सङ्घले सन् २०१४ मा ३२८ जनाको परीक्षण गरेको थियो जसमा ९५ जनामा यौन सङ्क्रमण देखिएको छ । त्यस मध्येका छजना पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिममा छन् ।
सन् २०१५ मा ४४१ जनामा गरिएको परीक्षणमा २०० जना महिलामा यौनरोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । यस्तै, बढ्दै गएको पाठेघरको मुखको क्यान्सर लाग्न सक्ने खतरालाई कम गर्न जनचेतनामा अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको परिवार नियोजन सङ्घ जिल्ला शाखा डोटीका प्रबन्धक चेतराज फुलाराले बताए । परीक्षण गर्दा जतासुकैको तथ्याङ्कले महिलामा यौनरोगको समस्या देखिन्छ, उनले भने ।
सुदूरपश्चिमको हकमा यौनरागीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । असुरक्षित यौनसम्पर्क र गलत परम्पराले समेत यौनरोगी बढिरहेका छन् । रासस
मेलबर्नमा नेपाल फेष्टिबलमा सहभागी सुष्मा केसीलाई ग्रेसको ल्यापटप उपहार!
एउटै डोरीमा झुण्डिएर ‘प्रेमीप्रेमिका’ ले गरे आत्महत्या
कुकुरले गाई टोक्यो, गाईको दूध पिउने ८० जना बिरामी
डा. गोविन्द केसीलाई झड्का, १२ बुँदे गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चमा रिट